ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री ज्यू, म तपाईंलाई ब्यक्तिगत हिसाबले पनि चिन्छु । ब्यक्तिगत रुपमा चिनाजानी भएको ब्यक्तिले भेटेरै कुराकानी गरेको भएपनि हुने थियो भन्ने लाग्ला । तर मेरा सवालहरु सार्वजनिक हितका लागि भएकोले खुल्ला पत्र मार्फत् मन्त्री ज्यूको ध्यान आकर्षण गराउँदैछु ।
नेपालले धेरै कुरामा आशीर्वाद पाएको छ । हामीले प्राप्त गरेको आशीर्वाद मध्ये एक हाम्रो अपार जलविद्युत क्षमता पनि हो। धेरे वर्ष अगाडि भएको सर्वेक्षणले हामीसँग ८३००० मेगावाट विद्युत निकाल्ने क्षमता छ भनिएको छ तर मलाई त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी छ भन्ने लागिरहेछ । किनभने, यो सम्भाव्यता सबै आकारका छ हजार भन्दा बढी नदीहरूबाट निस्कन्छ, जुन वार्षिक रूपमा लगभग दुई खरब घनमिटर पानी प्रदान गर्दछ, जुन तुलनात्मक रूपमा छोटो दूरीमा ठूलो उचाइको भिन्नताले तल झार्छ ।
यसका साथै नेपालमा सौर्य ऊर्जाको सम्भावना पनि प्रचुर छ । वर्षमा तीनसय दिनभन्दा बढी सौर्य विकिरण हुने गरेकोले नेपालको सौर्य क्षमता जलविद्युत क्षमताभन्दा धेरै गुणा बढी रहेको दाबी गरिएको छ । यसबाहेक, हामीसँग दिगो बायोमास, हावा र सम्भवतः अन्य स्वदेशी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूबाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता छ। दीर्घकालीन द्रुत, दिगो र नेपालको अथाह बिजुली उत्पादन क्षमताका लागि नेपालको दुरदृष्टि हुनु जरुरी छ । तपाईं यो क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण चालकको रुपमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई नेतृत्व दिईरहनु भएकोले के हामी हाम्रो सबै वा धेरैजसो ऊर्जा प्रयोगलाई विद्युतमा रूपान्तरण गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा तपाईंलाई विश्वास छ ? त्यसको कार्यान्वयनमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
नेपालमा यातायात, उद्योग, वाणिज्य र कृषि जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक ऊर्जाको खपत बढ्दै गएको छ। घरेलु क्षेत्रमा ऊर्जाको प्रयोग मुख्यतया प्रकाश, तताउने, चिसो पार्ने र विद्युतीय र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू सञ्चालन गर्न हो । उद्योगहरूमा ऊर्जाको मूख्य प्रयोगहरू प्रक्रिया ताप, चालन शक्ति (मोटिभ पावर) भएको , ब्वायलर र प्रकाशको लागि हुन्। यातायात क्षेत्रमा, ऊर्जा मुख्यतया सडक यातायात र उड्डयनमा प्रयोग गरिन्छ। शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था, कार्यालय, पसल, होटल र रेष्टुरेन्ट लगायतका व्यापारिक क्षेत्रमा ऊर्जा खपत सानो तर द्रुत रूपमा बढिरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा ऊर्जाको प्रयोग मूख्यतया सिंचाई पम्पहरू र प्रशोधन गर्नको लागि हो।
बायोमास आवासीय क्षेत्रमा इन्धनको मुख्य स्रोतको रूपमा जारी छ। परम्परागत स्टोभहरू अकुशल र धुवाँयुक्त छन्। विशेष गरी महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई राम्रोसँग अभिलेख गरिएको छ। तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) शहरी क्षेत्रहरूमा खाना पकाउने मूख्य इन्धन हो र यसले ग्रामीण घरपरिवारमा पनि द्रुत रुपमा प्रवेश गरिरहेको छ। कोइलाबाट चल्ने ब्वायलरहरू, चालन शक्ति (मोटिभ पावर), प्रक्रिया तापले औद्योगिक क्षेत्रको ऊर्जा खपतमा हावी हुन्छ।
बिजुलीले कुल औद्योगिक ऊर्जाको एक चौथाइ मात्र उपलब्ध गराउँछ, जुन अधिकांश विद्युतीय मोटरहरू चलाउन र प्रकाशको लागि हो। बायोमास र कोइला ब्वायलर इग्निशन र तताउन प्रयोग गरिन्छ। यातायात क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बढी छ । बायोमास र पेट्रोलियम उत्पादनहरू खाना पकाउन र तताउन प्रयोग गरिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रकाश र विद्युतीय उपकरणहरूको लागि बिजुली प्रयोग गरिन्छ। कृषि क्षेत्रको ऊर्जा मुख्यतया पेट्रोलियम पदार्थ र बिजुलीबाट आउँछ।
यो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै के हामीले हाम्रा घरेलु र व्यावसायिक दुवै क्षेत्रमा खाना पकाउने इन्धनलाई परम्परागत-एलपीजी-विद्युतमा बदल्न सक्छौं ? के हामी ताप, शीत भण्डार र चालन शक्ति (मोटिभ पावर) मा प्रयोग हुने हाम्रो सबै औद्योगिक ऊर्जालाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्न सक्छौं ? के हामीले हाम्रा सबै वा धेरैजसो निजी र सार्वजनिक सवारी साधन, रेलवे र रोपवेहरू बिजुलीमा चलाउन सक्छौं ? के हाम्रो कृषि क्षेत्रमा चाहिने सबै बत्ति, पानी पम्पिङ, प्रशोधन र भण्डारणमा बिजुली प्रयोग गर्न सकिन्छ ? यसबाहेक, के हामी सबैभन्दा प्रभावकारी रुपमा बिजुली प्रयोग गर्ने दिशामा काम गर्न सक्छौं ? वास्तवमा हामीले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र सबै क्षेत्रमा प्रयोगका सबै पक्षहरूमा ऊर्जा दक्षता समावेश गर्न आवश्यक छ।
यदि हामीले त्यसो गर्न सक्यौं भने धेरै फाइदा उठाउन सक्छौं। हाम्रो भान्सा सफा र प्रदूषणमुक्त हुनेछ। हाम्रो स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। साथै, परम्परागत इन्धनको प्रयोग घटाउँदा वन फँडानी कम गर्न र कृषि प्रयोगका लागि जनावरको गोबर मुक्त गर्न मद्दत पुग्छ। जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउँदा देशको लागि ठूलो वातावरणीय र आर्थिक लाभ हुनेछ। देशभित्रै द्रुत गतिमा बढ्दो बिजुली उत्पादनले हाम्रो ऊर्जा सुरक्षामा नाटकीय रूपमा सुधार ल्याउनेछ र औद्योगिक प्रोत्साहन र रोजगारी सृजनामार्फत देशको आर्थिक वृद्धिमा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ। यद्यपि, सफलता हासिल गर्न सजिलो छैन ।
यो बाटोमा हिंड्दै गर्दा धेरै चुनौतीहरू हुनेछन् भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। यी मध्ये केही कमजोर शासन र संस्थागत संरचना, तर्कहीन प्रोत्साहन र अपर्याप्त लगानी मैत्री संस्थागत र नीति संयन्त्र समावेश छन्। नीतिगत असन्तुलन र अप्रत्याशितता, बोझिलो र समय खपत गर्ने नोकरशाही प्रक्रिया, अपर्याप्त वित्तीय, अपर्याप्त मानव संसाधन, लैङ्गिक र सामाजिक बहिष्करण र प्राविधिक तथा सामाजिक-आर्थिक औचित्य र किफायती सम्बन्धी क्षेत्रगत चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्रिय र नवीन नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन आवश्यक हुनेछ।
मलाई के लाग्दैछ भने तपाईं नेपाली समाजलाई सुक्ष्मस्तरमा बुझेको मन्त्री भएकोले हाम्रो समाजका सबै पक्षहरूमा हाम्रो देशभित्रको विद्युत उत्पादन गर्ने विशाल क्षमताको प्रभावकारी रूपमा दोहन र उपयोगबाट हासिल गर्न सक्ने अपार लाभहरूलाई ध्यानमा राख्दै ती चुनौतीहरू सामना गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । हिजोको अवस्थामा जेनेरेटर सोलार उपकरण बेच्ने ब्यापारीहरुसंग मिलेर कमिसन लिई देशमा दैनिक अठार घण्टा लोडसेडिङ गराउने मन्त्रीहरुभन्दा तपाईं फरक पृष्ठभूमिबाट आउनु भएकोले तपाईंलाई राम्ररी थाहा छ उर्जाक्षेत्रले हामीलाई समृद्ध र समावेशी नेपाल हासिल गर्न पनि मद्दत गर्छ। जसको हामीले अहिलेसम्म सपना मात्र देखेका छौं। अब तपाईंबाट ठोस पहल होस् भन्ने अपेक्षा राख्दछु ।
(कृषि बजार प्रणालीका जानकार लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट फ्याकल्टीको रूपमा समेत आवद्ध छन्)
‘सरकारले बेलैमा नाकामा कडाइ नगरे कोरोनाले विकराल रुप लिन्छ’
10th January 2022 at 5:05 pm
उर्जाको क्षेत्रमा बिभिन्न बिकल्प र भावी सँभावनाको बिषयमा पदम सरले अत्यन्तै सान्र्दभिक र सम्भाव्य अवसरहरु पस्कनु भएकोछ । नेपाल जस्तो सम्भावनाले भरिपुण देशमा सम्बन्धित निकायको व्यक्तिले एक पटक आत्मा केन्द्रीत भएर भन्दा पनि राष्ट केन्द्रीत भएर निर्णय गर्नेहो भने जो कोही कुलमान घिसिँग बन्न सक्छ । आशाछ यो लेख पक्कै पनि पम्फा भुषाल सामु पुग्नेछ ।